တင်ဒါအသိပေးချက် - သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာစနစ်များပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ RayHaber
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာစနစ်များကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ
န်ဆောင်မှုများ၏သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာစနစ်များကို Maintenance န်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစီးပွားရေးပစ္စည်းဝယ်ယူရေး၏Xnumxbölg TCDD ညွှန်ကြားမှုပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ်34734 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်:
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 523307
ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2324643131-4931 - 2324647798
TCDD 3. သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာစနစ်များကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း (36 ကိုလအတန်ကြာ)
ခ) Place: TCDD3။ Mıntıka၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု
ဂ) Duration: နေ့စွဲ 01.01.2020, 31.12.2022 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆုံးသည့်ရက်စွဲ
က) နေရာ - TCDD 3.Region ညွှန်ကြားရေးမှူးAtatürkလမ်း Mimar Sinan အိမ်နီးချင်းAtatürkလမ်းဗိုလ်မှူးFazılရင်ပြင်အမှတ်: 121 / A 35220 Alsancak-Konak / İZMİR
တင်ဒါအသိပေးချက် - သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာစနစ်များပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်…
တင်ဒါအသိပေးချက် - ပီစီနှင့်စက်ပစ္စည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်း…
တင်ဒါအသိပေးချက် - Adana မီးရထားမီးရထားလမ်းလမ်းကြောင်း။
တင်ဒါအသိပေးချက် - alaatalağzı Wagon ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ…
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - ATS စနစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုအပြီးသတ်ပြုပြင်ခြင်း
တင်ဒါအသိပေးချက် - GM Regulator များအားထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း
တင်ဒါအသိပေးချက် - YHT Lines Bridge ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း…
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Bridges Culvert ကို Maintenance နှင့်ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းYaptırılacaktır
တင်ဒါအသိပေးချက် - Payas Station အဆောက်အ ဦး ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း…
တင်ဒါအသိပေးချက် - လျှပ်စစ်အလိုအလျှောက်နှင့် Semi-Automatic …
တင်ဒါအသိပေးချက် - မီးသတိပေးချက်နှင့်သတိပေးစစ်ဆေးခြင်း…
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - Yolçatı - Tatvan Line İhaleအချို့
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာစနစ်များကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ, TCDD3။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု